30 Days of Night: Dark Days – Gold Channel Movies
Video Sources 6362 Views
Don't walk into the dark.Oct. 04, 2010USA92 Min.R
30 Days of Night : Dark Days (2010) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Vampire ကားကောင်းတစ်ကားကို ကြည့်ချင်နေတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် ဒီ 30 days of night dark days ဆိုတဲ့ကားလေးကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်နော်
အချိန်ကာလတစ်ခုတုန်းက Vampire တွေကြောင့် မိသားစုဝင်တွေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေ ၊ ဘဝပျက်ခဲ့ရသူတွေ နာကျည်းချက်တွေ ၊ ပဟေဠိပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ ဆုံစည်းမိကြတဲ့အချိန်…….အဲ့ဒီ့နောက်ပိုင်းမှာ Vampire တွေရဲ့ တစ်ကျော့ပြန် ပြန်လည်နှိပ်စက်မှု ၊ ရက်စက်မှုတွေကို အတူတူတွန်းလှန်ဖို့ Plan တွေဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါမှာလည်း ပေးဆပ်မှုတွေရှိလာဦးမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာမှာပါ
ဒီကားလေးက Vampire ကားဆိုပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကြားက မေတ္တာတရားတွေ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမှာ ခံပြင်းမှုတွေကိုလည်း ကြည့်နေတဲ့သူတွေပါ ခံစားမိလာအောင် ဖော်ကျူးနိုင်တဲ့ကားလေးပါ။
ဒီတော့ Vampire တွေနဲ့ လူသားတွေကြားက တိုက်ပွဲတွေမှာ ဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးသတ်က မျှော်လင့်ထားသလိုတွေရော ဖြစ်လာပါ့မလားဆိုတာသိချင်ရင် ဒီကားလေးကို download လေး ဆွဲပြီး ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်
Genre : Horror .Thriller
Run Time : 1h32 min
Size : 670mb / 210mb
IMDb Rating 4.4 11,264 votes
TMDb Rating 4.6 194 votes
Download Openload SD မြန်မာ 210mb 4337months gcmovies
Download Openload HD မြန်မာ 670mb 9987months gcmovies
Thwe NayDecember 18, 2018Reply
admin ခင်ဗျ ဒီကားက ဒုတိယကားပါ။ ပထမကားရှိပါသေးတယ် ၂၀၀၇ မှာလား ၂၀၀၈ မှာလားမသိဘူး ထွက်ထားတာ။ သေချာမမှတ်မိတော့လို့။ အခုကားရဲ့ ပထမဆုံး နေထွက်လာတဲ့အချိန် တောင်ကုန်းပေါ်ကအခန်းက ပထမကားရဲ့ နောက်ဆုံးအခန်းပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပထမကားကိုလည်း တင်ပေးပါ။ ပထမကားနဲ့ အခုကားနဲ့က အဆက်အစပ် နည်းနည်းရှိပါတယ်။ အစဉ်အားပေးလျက်ပါ။
OakkarDecember 27, 2018Reply
ပထမကားက ၂၀၀၇ က ထွက်ခဲ့တာပါ
© 2019 by Gold Channel Movies. All Rights Reserved. Powered by DooPlay